Kaydinta Hal Doollar Si Aad Ugu Bixiso Dollar | Martech Zone
Isniin, Maarso 3, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Xalay waxaan daawaday bilowga (laakiin inta kale waan seegay) showga 'Big give show' ee Oprah. Waan jeclaa horudhaca - u dhiib qof $ 2,500 oo qofkii sameeya shaqada ugu fiican ee uruurinta lacagta ugu badan ayaa guuleysta.
Bandhigga waxaa udub dhexaad u ahaa inaad u tagto oo aad la kulanto qofka ama dadka aad caawineyso. Natiija ahaan, cadaadisku ma ahayn oo kaliya inuu waxqabad sameeyo - runti ma ahayn inaad dadka hoos u dhigto inaad halkaas u joogtay inaad caawiso.
Waxa aan u aqriyay dabagal ayaa ah in $ 2,500 uu runtii ahaa mid aan muhiim ahayn. $ 2,500 runti waxay ahayd kaliya inay kaa caawiso inaadan ka walwalin gaadiidka, wicitaanada taleefanka, abaabulka, iwm. Hadaad runtii diirada saareyso meesha iyo sida aad kubixineysid $ 2,500 si aad waxbadan uga dhufato, waad lumineysaa. Haddii, halkii, aad iska indhatirto $ 2,500 oo aad xoogga saartid lacagta weyn - waad ku socotaa!
Waa imisa Dollar?
Isbarbar yaaca aniga ayaa ah maalgashiga aan ku sameyno shaqadeena. Haddii aad haysato ilaha dhaqaalaha, inaad ka walwasho inta aad ku keydin karto iibsashada qayb ka mid ah qalabka xafiiska ayaa noqon kara mid carrab la '. Tusaale: Marka waxaad haysataa shaqaale sameeya $ 30 / saacaddii shaqadiisana lagu qiimeeyo $ 70 / hr oo baaraya internetka si loo keydiyo $ 25. Hadday saacad ku qaadatay wax iibsashada khadka tooska ah qiimaha ugu wanaagsan ee daabacaad cusub, waxaad lumisay $ 15. Taabadalkeed, waxay ahayd inaad kaliya iibsato madbacada uguhoreysa ee aad heshay oo aad ku iibisay adeega shaqaalahaas $ 70. Waxaad sameyn laheyd wax kabadan $ 15.
Maxaa intaa ka badan? Sababtoo ah indha indheynta internetka oo isku dayaysa inaad ku badbaadiso xoogaa lacag ah daabacaadda nuugista mana ahayn wixii shaqaalahaaga lagu shaqaaleysiiyay inuu sameeyo. Waxay doorbidi lahaayeen inay kashaqeeyaan mashruucooda, adiguna waad fiicnaan laheyd hadii ay shaqeyn lahaayeen. Waxay la kulmi lahaayeen hadafyadooda, waqtigana ilaalin lahaayeen, farsamadoodiina ku fiicnaan lahaayeen.
Waligaa ha Sharaxin Ugu Yar
Markii aan guursaday, waxaan safar ku aadnay Las Vegas iyo Laughlin aniga iyo xaaskeyga. Khamaariis ma ihi, laakiin waalidkeed ayaa ahaa. Talada kaliya ee hooyadeed ay igu siiso marwalba waxay ahayd inaan sharadto max. Waxaan fadhiistay in cabaar ah aniga oo ciyaaraya fiidyowga fiidiyaha iyo fiidiyaha fiidyowga hal habeen anigoo markiiba ku daadinaya $ 1.25. Uma eka wax badan, laakiin waxaan ku jiray Ciidanka Badda markaa ma aanan haysan lacag aad u badan. Waxaan u maleynayaa 'miisaaniyaddeenna khamaarka' inay ahayd $ 30 maalin kasta.
Muddo ka dib, markii aan arkay guntigayga gunta, waxaan bilaabay inaan dhigo 4 meelood meel markiiba .. ka dib 3… ka dibna 2… ka dibna 1… oo waxaan ku dhuftey Royal Royal. Soddohday ayaa ii faraxday - ilaa ay aragtay bixinta $ 62.50. Daankeeda ayaa hoos u dhacday. Haddii aan sii wadi lahaa $ 1.25, waxaan ahaan lahaa qiyaastii $ 25,000 taajir. Taabadalkeed, waxaan haystay baaldi kale oo rubuc ah.
Waxaan bartay casharkeyga.
Shaqadayda hadda, waxaan ku helay daawashada iyo u kuurgalida maalgashadayaasha ganacsiga waxayna ahayd indho fur. Maalgashadayaasheena ugama aysan faaruqin akoonadooda keydka iyo lacag kaash ah hawlgabkooda si ay noogu qamaaraan. Taa baddalkeeda, waxay maalgashi ku sameeyeen 10 shirkadood oo ay isku dheelitiraan dareenkooda si waafaqsan. Iyagu ma ay maal gelin oo dhan waqtigooda iyo lacagtooda hal ganacsi oo rajeynaya, tukanayay, iyo ku nuuxnuuxsaday inay taasi ka dhigi doonto.
Waxay lacagtooda ku faafiyeen toban meheradood waxayna raadsadeen inay ka caawiyaan ganacsi kasta iyagoo ka caawinaya meesha ay kari karaan. Qaar ka mid ah maal-gashadeena waxay si fudud u bixiyaan jawaab celin sida haddii ay yihiin macmiil. Qaarkood waxay bixiyaan dhaqaale qaarna waxay bixiyaan jawaab celin farsamo. Waxay aqoonsan yihiin sida xoogooda looga faa'iideysan karo ganacsi kasta oo ay u wadaagaan si waafaqsan. Aniga aamusnaan ayaan ula yaabay sida ay noogu odhanayaan halkan ku afuufo $ 25k halkaana $ 25k halkaa u dhig sidii wax aan waxba ahayn. Sababtu waa is waxba.
Waxay rabaan inaan sharad ku dhigno inta ugu badan oo aan xoogga saarno ganacsiga, oo aan ku jirin xisaabta keydka.
Si kale haddii loo dhigo, iyagu uma dukaamaysanayaan daabacadda ugu qiimaha jaban sidoo kalena ma doonayaan inaynu noqonno.
Tags: raad raadinxirmaanganacsicaadooyinkago'aanka iibsigaiibso cilmi baariscilmidukaankasharepointcaadooyinka shopping
Daaro Royal A in Black Jack, taasi waa cadaab ah gacan!
By the way Doug, Waxaan isku dayay inaan riixo permalink-ka qoraalkan oo ka socda quudinta RSS waxaana helay “Ma heli karno taas! Ama waad luntay ama annagaa nahay! fariin. Ma hubo waxa jira, laakiin waxaan u maleynayay inaad jeclaan lahayd inaad ogaato.
Oobow! Ilowday 'iyo video poker'. Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah inaan ku dhuftay Keno habeenkii ugu dambeeyay oo aan bixiyay safarka. Waxaan seegay Ghanna kale oo weyn. Oo garoonka diyaaradaha waxaan u seegay Ghanna kale. Waxaan ahay wax yar qaro weyn mararka qaarkood!
Re: RSS - Waxaan lahaa arrin markii ugu horreysay la daabacay. Waxaan u maleynayay inaysan daabicin waxaanan wax ka beddelay slug-ga boostada. Waxaan ahay guuleyste dhab ah caawa! 😉
Doug - Waxaan ku raacsanahay in waqtigu yahay lacag isla markaana saacad ku qaadashada raadinta qiimaha ugu fiican ay tahay qashin. Si kastaba ha noqotee, uma maleynayo inay taasi micnaheedu tahay iibso kan ugu horreeya ee aad ku aragto qiimo kasta ha lahaadee. Haddii ay igu qaadato shan daqiiqo inaan soo waco BestBuy.com, CircuitCity.com, Amazon.com iyo NewEgg.com si aan u arko midka qiimaha ugu fiican leh, way igu habboon tahay waqtiga aniga.